Ukuvimbela u-Abc.xyz Referral Spam - Iseluleko Sengcweti Esivela Semalt
I-Abc.xyz yigama lesizinda elidumile, okuyisakhiwo se-Alphabet Inc. Ngenxa yezizathu ezithile ezingaziwa, leli gama lesizinda libizwe njengogaxekile nge-Google Analytics. Ngakho-ke, inani elikhulu labaphathi bewebhu belivimbele ngokugcwele, futhi kufanele wenze okufanayo. Kuye kwabikwa ukuthi i-abc.xyz ivinjelwe inombolo enkulu yabaphathi bewebhu emhlabeni wonke. Lokho kugaxekile idatha ye-Google Analytics ngezinhlelo ezingekho zangempela zokudlulisela kanye nomgwaqo ongekho emthethweni. Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi ingenye yezingosi eziyingozi kakhulu ezisesidlangalaleni ze-spamming futhi akufanele zivulwe nganoma iyiphi imali.
UJack Miller, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu Semalt , uthi uma uvakashele le URL, isixhumanisi sayo siyogcinwa kusiphequluli sakho. Futhi, iqondisa abasebenzisi kumakhasi wewebhu aqukethe imiyalezo engajwayelekile. Omunye walawo myalezo ufundwa njengoba uvela kumsunguli kanye ne-CEO ye-Google, Larry Page, kodwa iqiniso ukuthi akuhlangene nhlobo futhi kufanele kuvalwe ngangokunokwenzeka.
Ukuvimbela i-URL ku-Google Analytics
Le i-URL ethile isebenzisa inamba enkulu yamaqhinga ukuze izenze zibukeke ziyiqiniso futhi zivumelekile..Abantu abaningi bayayinamathisela kumasayithi abo futhi bayibheke njengendlela yokudlulisela okuhle, kodwa empeleni akunjalo. Lokhu kudala ithrafikhi ye-ghost kusayithi lakho, kulimaza idatha yakho nsuku zonke. Ukuvimbela le-URL ku-Google Analytics ekuqaleni kwakho kubalulekile. Le URL ayikhuthazwa kumawebhusayithi amakhulu nabahlinzeki bezinsizakalo njengoba kuhlotshaniswa nokuhlaselwa okuningi kokuphinga. Abaduni nabagaxekile bahlanganisa abantu ku-spam yokudlulisela futhi babambe ulwazi lwabo lomuntu siqu. I-Abc.xyz yisayithi elivumelekile ngokwayo, kodwa uma lihlanganiswa noma lixhunyaniswa namanye amawebhusayithi, ayikwazi ukuthola imiphumela emihle.
Inhloso nomgomo wezokuthungwa kogaxekile ukukhomba idatha kanye namafayela kumawebhusayithi akho. Bazama ukuheha abantu ngokusebenzisa imikhankaso eminingi yokuphromotha. Bathi bazokhuthaza isayithi lakho futhi bakuthole ukuhambela izinga, kepha akulona iqiniso. Cishe bonke abakwa-spammers abathumelayo bakhulisa imiphumela yabo yokusesha ye-Google ngokubeka ama-backlinks, basebenzisa iwebhusayithi yakho ukudala ama-backlink anjalo futhi bangakudala izinkinga. Ziyakhanyiswa yizinkomba ze-Google futhi zizenza sengathi zenza umsebenzi ngenxa yakho.
Ingozi yesayithi lakho
I-Abc.xyz i-Google Analytics spam yokudlulisela ihlose ukulimaza isayithi lakho nokuchitha izilinganiso zayo kwi-intanethi. Iphazamisa idatha yakho futhi idala imibiko engalungile. Isinyathelo esilandelayo ukukuthumela ukuvakashelwa okufakiwe nokushaya ukuze ukungabaza kwe-Google Analytics kuwe. Lokhu kuthinta imibiko yakho eminingi futhi kunciphisa ikhwalithi yethrafikhi yakho. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuvimbela lewebhusayithi futhi ungabhalisi kumadili kanye nokunikezwa kwayo, kungakhathaliseki ukuthi kuyamangalisa futhi kuyamangalisa kangakanani. Kuzokuthola izinga eliphezulu lokunciphisa futhi uhlose amagama akho angukhiye ukukala izingosi zayo. Ukuze ususe, kufanele udale izihlungi bese uyivimbela ngokulungisa izilungiselelo zakho. Ungaphinda udale izihlungi ngaphandle kokukhuphula ukuvikelwa kwakho kwe-intanethi.